🥇 ▷ Google Go: nooca kama dambaysta ah ee mashiinka raadinta wuxuu adduunka ku gaaraa war muhiim ah ✅
Google Go: nooca kama dambaysta ah ee mashiinka raadinta wuxuu adduunka ku gaaraa war muhiim ah
Dhamaadka 2017 Google ayaa bilaabay a nooca Ultralight ee mashiinka raadintaada magaca Google Go, codsi ka yar 7 MB oo ilaa hada ahaa mid lagu heli karo dalal aad u yar iyo aaladaha Android Go Edition.
Ilaa maantadan la joogo codbixinta kama dambaysta ah Google Go inay diyaar u ahaadaan soo dejinta qof walba. Nooca suugaanta ee mashiinka raadinta ayaa hadda laga soo degsan karaa dal kasta iyo aalad kasta.
Kani waa Google Go
Google Go Waa codsi fudud oo dhakhso leh oo loogu talagalay aaladaha kuwa kaydinta yar, laakiin sidoo kale loogu talagalay kuwa isticmaala ee raba kaliya nooca raadinta aasaasiga ah ee Google, iyo dan kama galaan u huray Kaaliyaha Google ama astaamaha ‘Lens Google’.
Halkan Google Go waxaan ka helnaa codsi sahlan oo lagu sameeyo baaritaannada, soo dejiso sawirro iyo GIFs, ka hel warar la Baadi oo adeegso nooca loo yaqaan ‘capped’ of Lens Google. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale u shaqeysaa sidii bilaabi marka ay soo bandhigayaan codsiyada aan rakibanay.
Lens Google Waa mid ka mid ah sheeko-bixinnada cusub ee bilowga adduunka ee Google Go. Aqoonsiga muuqaalka Google waxaa lagu siidaayay noocaan ‘Ultimateight’ oo leh nooc capped ah, kaas oo kaliya waxay u oggolaaneysaa inay aqoonsato qoraalka ee sawir qaadista kaamirada. Ikhtiyaarada uu noocani Lens ogolaaday waa in la tarjumaa qoraalka ama kor loo dhagaystaa.
Arrinta kale ee cusub ayaa ah in isku-dhafka webka Google Go isku-dhafan uu waliba noo oggolaado inaan dhageysanno qoraalka bogagga **, oo ah nooca Google uusan u oggolayn inuu sameeyo.
Ma jiri doonan cod cod raadis ah ama raadinta widget ka Google si loogu daro makiinaddan cusub ee raadinta qarsoodiga ah shaashadeena hore.
Google Go Waa codsi diiradda lagu saarayo waddamada soo ifbaxaya, halkaasoo aaladuhu ku yar yihiin kaydinta xogta heerarkuna aad qaali u yihiin. Dejinta dalabka waxaan ku dhaqaajin karnaa habka aasaasiga ah si loo keydiyo xogta marka la xirayo bogagga aasaasiga ah ee websaydhada. Way noo oggolaanaysaa keydi 40% xogta.
Nooca caadiga ah ee dalabka Google wuxuu ka badan yahay 200 MB oo boos ah halka nooca noocaan ah ku fadhiyaa 10 jeer wax kayar.
La wadaag Google Go: nooca kama dambaysta ah ee mashiinka raadinta wuxuu adduunka ku gaaraa war muhiim ah